Jikota Okwu 2014 na CloudOn: Dabere na LibreOffice | Site na Linux
Jikota Okwu 2014 na CloudOn: LibreOffice dabere na uzo ozo na MS Office
Mgbe anyị na-ekwu maka ndị ọzọ na ngwa ụfọdụ, ọ bụghị mgbe niile ka anyị rụtụrụ aka na ụdị ha maka GNU / Linux, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ, iwu ji anyị na anyị na ndị sistemụ ndị ọzọ arụ ọrụ anyị.
Ahụrụ m na GUTL otu isiokwu enyi Llamaret na-ekwu maka ya Jikọọ Okwu 2014, editọ ederede nke e chere na ọ dabere na ya Onye edemede nke FreeOffice, ma o nwere interface yiri MS Office 2010. Ekpebiri m ibudata ya iji nwaa ya ma gwa gị banyere ahụmịhe m gbasara ngwa a, mana nsogbu bụ na ọ dị naanị maka MS Windows.
1 Nweta Okwu 2014
2 CloudOn maka iPad
Nweta Okwu 2014
Agbanyeghị, ọ naghị afụ ụfụ ịnweta ụzọ ọzọ mgbe anyị na-arụ ọrụ na Windows, yabụ ana m ahapụ gị njikọ njikọ:
Budata Okwu jikọrọ ọnụ 2014
Ọ bụ ezie na Sourceforge na-ekwu na ọ dabere na LibreOffice, anyị nwere ike ịhụ na nkọwa nke ọrụ ahụ nke mepụtara na VisualBasic ma jiri ya .Net / Mono maka interface ya. Enwere ya ikike na okpuru License Akara Creative Commons.
CloudOn maka iPad
Uzo nke abuo nke m choro igwa gi okwu abughi OpenSource na otutu obere (obu ezie na ejighi m n'aka), mana ihe ichoro di ebe a bu na o sitere FreeOffice nakwa dị ka kwuru na Oge mgbe. Na-akpọ Cloudon ma ọ bụ naanị maka iPad.
Ihe na-adọrọ mmasị bụ na agbanyeghị na ọ dabere na LibreOffice, interface ya dị anya site na Office Suite a, ya mere, na LibreOffice jọrọ njọ nwere ike ịgbanwe ma ọ bụrụ na ndị mmepe chọrọ ya.
Ma ọ nweghị ihe ọ bụla, naanị m chọrọ ịgwa gị banyere nke a n'agbanyeghị na ọ bụghị na usoro isiokwu nke blog. 😉
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Jikota Okwu 2014 na CloudOn: LibreOffice dabere na uzo ozo na MS Office
based on libreoffice, for ipad and not libre …………… rue m mara libreoffice na eji lgpl.
Ọ bụrụ na ha dabere na apache openoffice, nke ahụ bụ ihe ọzọ.
Ọfọn, lee gị .. egwu hahaha
njikọ njikọ jikọrọ aka egosighi ihe ọ bụla, ọ bụ naanị a http:///
Njikere, gbazie !!
LOL !!! Ugbu a ị ebudatara nbudata iji jikọta ụwa 2014. 3 taa. Kemgbe 30/10 23 downloads !!!!
Obodo di elu: 30% nke dowloaders !!!!
ezigbo ihe nchọgharị + office.com
.Net maka gịnị? dijo
Aghọtaghị m ihe kpatara eji ewe iwe na LO site na iji .net kpuchie, ọ ka mma ịnweta otu na-ewepu akara niile nke java.
Ma ọ dịkarịa ala, enwere m olileanya na ọ bụrụ na ọ na-ejide opendocument n'ụzọ ziri ezi.
Zaghachi .net maka gịnị?
mmemme kacha mma dijo
Achọghị m mmemme nke mmasị, n'ihi na mmemme dị iche iche bụ ndị na-arụ otu ọrụ n'agbanyeghị sistemu kọmputa dịka LibreOffice.org ma ọ bụ OpenOffice.org (ha bụkwa n'efu).
Banyere otu 'ọmarịcha' ngwa iPad ahụ si dị, ihe niile m na-ahụ bụ ngwa nke ga-adaba na mmachi nke ngwaọrụ nke ọ ga-agba ọsọ, ejiji nke ịmachi ngwa na kọmputa nwere ihu ọma.
Zaghachi mmemme kachasị mma
Abụ m onye na-eso ụzọ Italo Vignoli na Michael Meeks na Google +.
LibreOffice na-anabata gị CloudOn. Nke a mere ka o doo anya site Italo Vignoli na Michael Meeks, ndị otu Document Foundation nke LibreOffice.
Echefuru m na Elav bụ onye na-eso ụzọ kwesịrị ntụkwasị obi nke Miguel de Icaza ọ bụ ya mere m ji anwale
Jikota Okwu 2014, mmemme nke jiri Mono C # maka eserese ya, n'ihi na jikọrọ ọnụ Okwu 2014 na-eji ụlọ akwụkwọ Microsoft na Mono, enweghị ike ibupụ ya na GNU / Linux ugbu a. Olileanya na ọdịnihu ị nwere ike.
Naanị kwuo na ngwa CloudOn bụ n'efu maka ipad.
Ọ bụ ụzọ ọzọ iji hụ akwụkwọ gị ma ọ bụrụ na ịnweghị pc n'aka.
Aghọtaghị m ihe kpatara blọọgụ niile ji kwughachi na "Okwu jikọrọ ọnụ" dabere na LibreOffice. Agbalịrị m ya ma ogo ya dị ka nke mmemme mmemme ụlọ akwụkwọ. O nwedịrị Epeepe nwalee ma! Lee anya n'ọkwa ọkwa. Ọ naghị emepe faịlị otu, ọ naghị akwado ụdị niile LibreOffice na-akwado, ya na atụmatụ ndị ọzọ anaghị arụ otu ọrụ. Ọzọkwa, ebe bụ koodu isi?
Anaghị m ekwu ya, Blog ekwughị ya, ọ na-ekwu ya na peeji nke jikọrọ ọnụ n'onwe ya.
Mega site na ọnụ ya na MegaCMD